Yintoni Eyona Ncwadi Stores Aseyurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Yintoni Eyona Ncwadi Stores Aseyurophu
Kukho ezininzi izizathu zokuba abantu bayathanda ukuba bahambe. Omnye wabo uyakwazi ukuva kakhulu kangangokuba ukukwazi ukuba emitsha nenika umdla amava. Yintoni eyenza abahambahambayo intle kukuba abantu ezahlukileyo sichulumancile zizinto ezahlukeneyo. Zombi iadrenaline uthathe esebenzayo welifu, elinde njengaye iimeko eziyingozi kancinane. Foodies kutyelela iindawo ezintsha kukumbona iipleyiti zazo kunye nezinye iintlobo zokutya umdla. Yaye bookworms phakathi abahambi, amathala eencwadi kunye noovimba ncwadi kunokuba iindawo ezininzi ezintle ehlabathini. Ukuba uhamba eYurophu elinde ncwadi igcina kakhulu eYurophu ukuya kutyelela ngololiwe, sibe iingcebiso ezimbalwa kuwe:
France lilizwe elinanziweyo, yaye Paris na oya kuyo edume kakhulu. Xa iintlobo zobugcisa cinga Paris, Notre Dame qatha engqondweni, kunye nemithombo amahle kunye nemithi cherry apha nembali. Kungokuba kanye lo umbono uya kufumana xa undwendwela Shakespeare & Company, along with fantastic ambiance of books inside.
Ababhali ezinkulu ezininzi (kuquka Ernest Hemingway and uVoltaire) bachithe ixesha ukubhala kule sakhiwo kwinkulungwane ye-17. the imbonakalo yelizwe wenziwa ezishelifini ezindala kunye neencwadi, zibekwa zibe inkitha amagumbi amancinane kunye nooks. Ivenkile ncwadi sprawls phezu imigangatho ezimbini, ethabathela nangaphandle kubonakala incinane kakhulu kunokuba yinto. Shakespeare & Company kwakhona zinginginya iziganeko ngokuhlwa kunye ufundo umbhali, nto leyo akukho othanda iincwadi ukuba miss.
YaseVenice yenye yezinto ezininzi romantic imizi lifuna ElamaTaliyane, kwaye kwakhona ekhaya ukuya kwenye eyona ncwadi igcina edume eYurophu. Libreria Acqua Alta waziwa kakuhle ukugcina iincwadi kwiibhafu nkqu gondola. Kukho nezinye iindawo zokugcina kakhulu, ezifana amabhakethi kunye nezinye imikhumbi ezidadayo. Kwakhona sibonisa ngezinyuko eyenziwe ngokupheleleyo yeencwadi ezonakeleyo neveranda yalo emva.
Kunye nezibilini zayo ezintle, Library Water High Venice, ngokungathandabuzekiyo ixabisa utyelelo kwaye ndiya kuvuyela nayiphi na incwadi lover. Ukuba ngaba unqwenela ukuba loo nto wena ulahleke ngaphakathi, ukubheja kwakho osenyongweni uza apho kamsinya nje kuvula ekuseni.
Maastricht eNetherlands kungangi encotsheni zonke abakhenkethi weminqweno. kunjalo, kufanele kube ukuba uyabathanda kwiivenkile ncwadi kunye neencwadi ingakumbi. baseDominican okanye Selexyz Dominican Church kulo mzi a 700 isakhiwo konyaka ubudala eyakhiwa ngeendlela ezahlukahlukeneyo yesiGothic bokwakha.
Kuyinto entsonkothe ​​ngaphandle kunye yomnyingi ngaphakathi. Dominicanen kananjalo luphuphume ngobuninzi nezihloko ziya kuvuya intliziyo incwadi lover. Ungakwazi Uthatha kofu kwi cafe ehamba ngelixa ufunda incwadi. okukanye, unako imbono kwamnandi ukusuka kumgangatho ophezulu.
Cook & Ncwadi ivenkile incwadi umdla yaye restaurant kulizwe Woluwe-Saint-Lambert, Bheljiyam. Nangona abaninzi best incwadi igcina ezithile ukutya nento eselwayo, Cook & Book uthatha ingqiqo a uqhela. It ikuvumela ukuba uhlale phantsi isidlo engqongwe iincwadi ezahlukeneyo. Loo nto yenza kube indawo kakhulu abo ungathanda ukuba zombini iincwadi elungileyo nokutya okumnandi. Kuthini okuthe vetshe, kuba ngokuqinisekileyo akuyi into unokufumana yonke imihla.
Ulungele ukuya kutyelela ezinye eyona ncwadi stores Aseyurophu? Uyakwazi ukuhamba ngololiwe ukuya eParis no Venice, kwakunye eNetherlands and Belgium. Incwadi amatikiti zakho kwangethuba kwaye uqale uceba incwadi yakho bali iholide yakho elandelayo!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/charming-book-stores-europe/- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, kwaye ungatshintsha /pl ukuba /ja okanye /tr kwaye ngaphezulu iilwimi.
#incwadi #iincwadi #bookstore #bookstores #traveleurope